नेपालको जलबिद्युत उद्योगलाई तहसनहस बनाउन भारतले जारी गरेको नयाँ नियम यस्तो छ ! – Halkhabar kura
१७ फाल्गुन २०७७, सोमबार ११:२६
नेपालको जलबिद्युत उद्योगलाई तहसनहस बनाउन भारतले जारी गरेको नयाँ नियम यस्तो छ !
नेपालबाट चिनियाँ लागनीकर्ता खेदाउने भारतको दाउ !
भारतले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूबाट विद्युत किन्दा उत्पादक कम्पनीमा अरु देशको लगानी रहेको देखिएमा त्यस्तो विद्युत खरिद नगर्ने कानुन पारित गरेको छ।
विद्युत व्यापारका लागि भारतले सम्झौता गरेका मुलुक बाहेक अरु देशको लगानी कुनै उत्पादक कम्पनीमा भएमा भारतले त्यस्तो विद्युत खरिद गर्नेछैन।
कुनै विदेशी कम्पनी वा देशले भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि प्रत्यक्ष समझदारी नगरेको अवस्थामा त्यस्तो कम्पनी वा देशले भारतमा विद्युत बेच्न पाउने छैन। उदाहरणका लागि भारत र चीन वा भारत र अस्ट्रेलिया बीच विद्युत व्यापारसँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता भएको छैन।
तर, ती देशबाट नेपालका विद्युत उत्पादन आयोजनामा लगानी भएमा भारतले त्यस्ता आयोजनाबाट विद्युत किन्ने छैन। त्यस्तो देशले भारतसँग विद्युत व्यापारका लागि छुट्टै सम्झौता नगरेको खण्डमा विद्युत बेच्न पाइने छैन।
सीमा जोडिएको देशको हकमा पनि यो लागू हुने भनेर भारतले स्पष्ट पारी दिएको छ। जसको अर्थ चीनले लगानी गरेका आयोजनाहरुबाट भारतमा विद्युत बेच्न नसकिनु भन्ने हो। तर, भारत र चीनबीच विद्युत व्यापारका लागि कुनै सम्झौता भएमा भने यो समस्या रहने छैन।
नेपालका अधिकांश जलविद्युत आयोजना विदेशी लगानीमा निर्माण भइरहेकाले ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युतको सम्भावित बजार खोज्न भारतको यो निर्णयपछि नेपाललाई थप समस्या हुने देखिएको छ।
Previous औद्योगिक क्षेत्र धमाधम निर्माण
Next क्रिश्चियन विधिबाट अञ्जु पन्तले यसरी गरेकी रहिछन् विवाह (भिडिओ)